Jereo hoe iza no shampoo mafy orina tsara indrindra | Bezzia
Ny shampoos matevina tsara indrindra
Susana Garcia | 04/04/2021 20:00 | beauty, Vokatra hatsaran-tarehy
La vao tonga ny hevitra momba ny shampoos mafy, fa nanjary fironana izy ireo raha ny fikarakarana ny volonay no resahina. Izany no antony tsy maintsy anoloranay aminao izay heverinay fa shampoos mafy orina tsara indrindra eny an-tsena, andiana kosmetika tonga lafatra amin'ny fikolokoloana volo amin'ny fihetsika isan'andro, satria ny shampoo dia iray amin'ireo lakilen'ny volo salama.
ny shampoos mafy orina dia tonga amin'ny endrika iray izay mora kokoa amin'ny tontolo iainana, satria tsy manana fitoeram-plastika matetika izy ireo, nefa koa, satria mafy orina, dia vitsy ny akora simika ampiasaina hamoronana ny endriny ary maro amin'izy ireo dia ekolojika, izay mety amin'ny rano, izay tsy voaloto loatra. Ka mieritreritra izahay fa tonga ny fotoana hirosoana amin'ny kosmetika matanjaka.
1 Angel Hair avy amin'i Lush
2 Shampoo matevina an'ny cosmetika an'i Maria
3 Shampoo Dr Tree roa amin'ny iray
4 Valquer shampooing volo maina
Angel Hair avy amin'i Lush
Ity dia iray amin'ireo orinasa niavaka indrindra tamin'ny tarehy fanatsarana tarehy, satria tsy ny shampoos ihany no misy azy, fa koa ny «conditioners», ny menaka ary ny karazan-javatra rehetra. Ny shampoos matevina an'i Lush dia iray amin'ireo zavatra tsara indrindra azo vidiana amin'ny tranokalan'izy ireo izany ary misy karazany maro. Ny shampoo an'ny Angel Hair dia iray amin'ireo mpivarotra tsara indrindra, indrindra satria malemy fanahy izy ary mety amin'ny karazana volo rehetra. Anisan'ireo singa ao aminy i Ylang ylang handoko ny volo sy hikarakara azy. Aquafaba dia manampy hery sy famirapiratana, raha ny rano raozy sy ny mpamosavy dia manampy amin'ny fikolokoloana ny hodi-doha mora tohina indrindra. Ny lecithin soja dia manampy amin'ny fandraisana ireo akora hafa. Ny zavatra tsara dia ny fahitantsika ny akora rehetra sy ny anjara birikin'ny tsirairay amin'izy ireo amin'ny volontsika, izay manampy antsika hisafidy tsara kokoa.
Shampoo matevina an'ny cosmetika an'i Maria
Este shampoo mafy dia voajanahary, vegan ary tanana. Volom-bolo natao ho an'ny volo misy menaka izy io, satria miaraka amin'ireo akora ao aminy dia manandrana mamaha ny olan'ny tsiranoka sebum ao amin'ny faritra an-doha izy, izay olana lehibe amin'ny volo misy menaka. Ny menaka jojoba ao anatiny dia manome hydration tsy misy fahatsapana menaka. Ny ranom-boasarimakirana no manampy amin'ny hery ampiasainy hifehezana ny famokarana tavy. Ny tanimanga fotsy Kaolin dia manampy amin'ny fanadiovana moramora ny loha amin'ny loto, nefa tsy manapotika ny pH. Ny fitrandrahana hibiscus sy ny menaka rosemary dia manampy amin'ny fitazonana volo ho matanjaka sy ho salama hatrany amin'ny faka. Tsy isalasalana fa safidy tsara ho an'ny akora ao aminy sy hikarakarana ny volo misy menaka.
Shampoo Dr Tree roa amin'ny iray
Raha tsy manam-potoana firy amin'ny fombam-bolo ianao na kamo ianao dia afaka mividy shampooing maharitra roa mitovy amin'ny Dr. Tree's. ATSINANANA shampoo hanitra voanio dia tonga lafatra amin'ny volo mikarakara sy mahavelona. Manana menaka argan izy, izay fantatsika fa volamena misy ranoka noho ny heriny hamono sy hikolokolo. Ankoatr'izay dia manana vitamina A sy E izy hamelombelona sy hikarakarana ny volo. Izy io koa dia manana fototra dibera kakaô izay mikarakara ny hodi-doha. Ny zavatra tsara indrindra amin'ity shampooing ity dia ny fanadiovany sy hidiran'ny rano ka tsy tokony hampiasaina ilay «éditioner» ianao.
Valquer shampooing volo maina
Ireo orinasa rehetra ireo dia manana karazana shampoo maromaro, na dia iray monja aza no resahina. Ohatra, ity iray avy amin'ny Valquer ity dia natao ho an'ny volo maina, na dia misy karazana volo hafa aza. ATSINANANA ny shampoo an'ny volo maina dia misy menaka voanio sarobidy hamandoana azy. Tokony holazaina fa tsy shampooing misy fangaro voajanahary tanteraka fa tsara ihany koa raha tsy mitady zavatra vegan ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Ny shampoos matevina tsara indrindra
Ronono voanjo Macadamia, tombony ary fomba fanomanana azy
Fahazarana mahasalama ara-tsaina manampy anao